'शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा' प्रभावकारी होला त ? - 'शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा' प्रभावकारी होला त ?
‘लभ स्टेसन’ अर्को गीत मेरो आगनीमा रिलिज | स्याङ्गजाली दुई सहसचिव अर्याल र पाण्डेको सगै सरुवा | चिया उत्पादन र अनुसन्धानमो चीनको सहयोग आवश्यक : मन्त्री खनाल | कांग्रेस २३ राज्यमा एक्लै चुनाव लड्दै | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया लम्बियो
‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा’ प्रभावकारी होला त ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २6 आश्विन, 06:07:04 PM
नेपालमा व्यवसायिक शिक्षा नभएको अवस्थामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा प्रभावकारी हुन गाह्रो नै छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि कर्जा पाउने आशामा व्यवसायिक ज्ञानबिना नै कर्जा लिनु उचित पनि हुँदैन । कर्जा लिएर के काम गर्ने हो ? कति कर्जा लिँदा कस्तो व्यवसाय गर्न मिल्छ ? कुन व्यवसाय गर्दा राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने विषयमा लगानीकर्ता आफैं जानकार भएमा राम्रो हुन्छ ।
आजभन्दा २/४ वर्षअघि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा र नेटवर्कहरु थिएनन् । अहिले पनि ती कठिनाईहरु त झेल्नु परेको छ । तरपनि पहिलाको भन्दा केही सहज भएकाले वित्तीय पहुँच गाउँसम्म पुगेको छ । ग्रामीण भेगका मानिसहरुलाई बैंकिङ सुविधा आवश्यक ठानेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाउँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको कारण आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाउँ गाउँमा पुगेर ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुलाई सेवा तथा सुविधा दिँदै आएका छन् ।
तर, गाउँ गाउँमा बैंकहरुले शाखा खोल्दैमा अथवा गाउँका २/४ जनाले बैंकमा खाता खोल्दैमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ भन्न मिल्दैन । वित्तीय पहुँच विस्तार हुनका लागि गाउँका मानिसहरुमा बैंक सम्बन्धी राम्रो ज्ञान हुनपर्छ । जस्तै, यदि कुनै पनि मानिसले बैंकबाट कर्जाको माग गर्दा आफूले गर्ने काम, व्यवसायबाट हुने फाइदा लगायतका विषयमा बैंक समक्ष सहज रुपमा व्यक्त गरी उसले त्यस बैंकबाट सजिलै कर्जा प्राप्त गर्यो भने त्यहाँका मानिसहरुमा वित्तीय पहुँच रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँचको विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच र विचारलाई मुर्तरुप दिन त्यति सहज भने पक्कै थिएन । बैंकको शाखा विस्तार गर्नलाई धेरै लागत लाग्ने गर्छ । जस्तै कार्यालय स्थापनादेखि लिएर कर्मचारी, सुरक्षा र अन्य विविध खर्चको व्यवस्था गर्नु चानेचुने कुरा थिएन । बैंक भनेको विशुद्ध व्यापार मात्र होइन । पहिलो त सेवा नै हो । लागतको अनुपातमा तत्कालै फाइदा हुँदैन । त्यसकारण त्यस्ता ग्रामीण भेगहरुमा शाखा विस्तार गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, बैंकहरु गाउँमा पुर्याउन धेरै लागत लाग्छ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु गाउँमा स्थापना नगर्ने भन्ने हैन । जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाउँमा जाँदा सहज हुन्छ त्यस्तो वित्तीय संस्थाहरुलाई गाउँमा लैजानुपर्छ । यसो गर्दा खर्च कम हुनुका साथै आम मानिसलाई सहजता पनि हुन्छ ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहर केन्द्रीत भन्दा पनि गाउँ केन्द्रीत भए भने एकदम फाईदा छ । फाईदा भनेको त्यतिकै हुँदैन । यसको लागि मिहिनेतको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । दिनप्रतिदिन ग्रामीण भेगका युवाहरु विदेश पलायन भइरहँदा ग्रामीण भेगका बैंकहरुमा काम गर्ने वातावरण सहज छैन ।
बैंकपछि ग्रामीण भेगमा स्थापना गर्न सजिलो वित्तीय संस्था भनेको सहकारी हो । सहकारी संस्था दुर्गम भेगमा स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । गाउँ–गाउँमा सहकारी संस्थाहरु स्थापना गरी सहकारीलाई नै बैंकिङ मोडलमा लैजानुपर्छ । सहकारीलाई स्थानीय सरकार र सबै मिलेर गाउँ–गाउँसम्म सहज रुपमा पुर्याउन सक्ने भएको कारणले गर्दा गाउमाँ वित्तीय पहुँच सजिलै पुग्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरु भन्दा पनि सहकारीलाई विकास गर्नु जरुरी छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न र अगाडी बढाउनको लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । बैंकहरु आफैँले ठुलो–ठुलो कर्जा प्रवाह गर्नुभन्दा पनि त्यो पैसा कर्जाको रुपमा सहकारी र लघुवित्तलाई दिनुपर्छ । यस विषयमा सरकार र राष्ट्र बैंकले जोड दिनुपर्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना गर्ने कार्य नै सुरुमा कठिन छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहर केन्द्रीत भन्दा पनि गाउँ केन्द्रीत भए भने एकदम फाईदा छ । फाईदा भनेको त्यतिकै हुँदैन । यसको लागि मिहिनेतको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । दिनप्रतिदिन ग्रामीण भेगका युवाहरु विदेश पलायन भइरहँदा ग्रामीण भेगका बैंकहरुमा काम गर्ने वातावरण सहज छैन । नेपालमा कृषि उत्पादन क्षमता बढी छ । विदेश गएका युवाहरु नेपालमा आएर कृषिसँग सम्बन्धित आयआर्जनका कामहरु गरी नेपालमै उद्यमशिलताको विकास गर्ने सक्यो भने ग्रामीण बैंकिङ धेरै राम्रो हुन्छ ।
ग्रामीण बैंकिङलाई नाफामुखी बनाउनका लागि नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि छुट्टै संस्थाहरुको स्थापना गर्नुपर्छ । नेपालको कृषि क्षेत्र नाफामुखी छ भनेर सबै युवाहरुलाई चेतना फैलाउन सक्नुपर्छ । कुषिबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरुलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि एउटा प्रवद्र्धन संस्थाको स्थापना गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यी सुविधाहरु भयो भने ग्रामीण बैंकिङको अवस्था राम्रो हुँदै जान्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको लगानीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अनिवार्य गरेको छ । तर पनि जिडीपीमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान बढ्न सकेको छैन । जबसम्म नेपालको अर्थतन्त्रले सही गति लिन सक्दैन, तबसम्म नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका विजनेशहरुले पनि राम्रो नाफा आर्जन गर्ने सक्दैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको पैसाको सही रुपमा उपयोग हुन सकेको छैन । कर्जाको दुरुपयोग भएको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो लगानीको २५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर तोकिदिएको भए पनि त्यसको सदुपयोग राम्रोसँग भएको छैन । नेपालको व्यापार घाटा पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको कर्जा दुरुपयोग हो । राज्य, बैंक तथा सर्वसाधरणहरु सबैले इमान्दारीपुर्वक काम गर्दै आए भने यो समस्या समधान हुन सक्छ ।
कमर्सियल बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुको एउटा निश्चित उद्देश्य छ । तर, विकास बैंकहरुको छुट्टै उद्देश्य भएन भन्ने कुरा सुन्न पाइन्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पनि विकास बैंकहरुले उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सकेका छैनन् । विकास बैंक र कमर्सियल बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्न दिएको निर्देशनमा खासै फरक छैन । विकास बैंक र कमर्सियल बैंकले गर्ने काम यो पछिल्लो समयमा आएर एउटै पनि भएको देखिन्छ । आधुनिक बैंकहरुले विदेशी बैंकहरुसँग प्रतिष्प्रर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि नेपालमा विकास बैंकहरुसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । त्यसैले, विकास बैंकहरु उद्देश्य निर्माणमा कमर्सियल बैंकहरु भन्दा पछाडि परेका हुन कि भन्ने अर्को तर्क हुनसक्छ ।
अर्थतन्त्रको विकासमा विकास बैंकहरुको भुमिका सबल बनाउन अझ धरै काम गर्न बाँकी नै छ । देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्नका लागि विकास बैंकहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरी आफ्नो लगानीको धेरै जसो लगानी कृषि क्षेत्रमा नै गर्नुपर्छ । विकास बैंकहरुले कृषि क्षेत्रको लगानीलाई जोड दिँदै आए भने देशको अर्थतन्त्र सबल हुँदै आउँछ । नेपालमा आर्थिक विकासका सम्भावनाका क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन र जलस्रोत हुन् । यी क्षेत्रहरु विकासका लागि अब्बल हुँदाहुँदै पनि सहि रुपमा प्रयोजन हुन नसकेको कारण आज नेपाली जनताहरु पछाडि परेका छन् । यी सम्भावनाका क्षेत्रलाई सही रुपमा प्रयोग गर्दै आयो भने मलाई लाग्छ नेपालमा धेरै विकासको सम्भावना छ ।
यसका लागि निजी क्षेत्र, सरकार, राज्य, सहकारी र बैंकहरु मिलेर कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । यसरी कृषिमा काम गर्ने हो भने मलाई लाग्छ अबको दश बर्षमा राज्यले जुन कल्पना गरेको छ त्यो उद्देश्य हात पार्न सकिन्छ । बैंकलाई कृषि क्षेत्र नाफामुलक हो भनेर देखाउनुपर्छ ।
बैंकहरु कृषिजन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि किन अहिले त्यति तयार भइरहेका छैनन् । नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर, पनि नेपालीहरुले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्र परम्परागत रुपबाट माथि उठ्न सकेको छैन । हिजोका दिनहरुमा कृषिले मानिसहरुको जीवन धानेको थियो । तर आज यस्तो परम्परागत कृषिले मानिसको जीवनस्तरलाई धान्न सक्दैन । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक रुपमा विकास गर्न तथा आधुनिकीकरण गर्न सकिएन भने कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिजन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न मान्दैनन् । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केही नाफा हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न खोज्ने परम्परा नै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नाफा नहुनु भनेको बैंकको लगानी डुब्नु हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी डुब्नु भनेको जनताको निक्षेप डुब्नु हो । यसलाई बिडम्बना नै मान्नु पर्छ । कृषि क्षेत्र परम्परागत रुपमा नै चल्ने हो भने यसबाट नाफा कमाउन सकिँदैन । कृषि क्षेत्रबाट कुनै पनि नाफा नभएको कारण बैंकहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्र(कृषि)मा लगानी गर्न पछि हट्ने गरेका छन् ।
यसका लागि निजी क्षेत्र, सरकार, राज्य, सहकारी र बैंकहरु मिलेर कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । यसरी कृषिमा काम गर्ने हो भने मलाई लाग्छ अबको दश बर्षमा राज्यले जुन कल्पना गरेको छ त्यो उद्देश्य हात पार्न सकिन्छ । बैंकलाई कृषि क्षेत्र नाफामुलक हो भनेर देखाउनुपर्छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण तयार हुन्छ ।
नेपालमा व्यवसायिक शिक्षा नभएको अवस्थामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जाको कुरा आएका छन् । नेपालमा व्यवसायिक शिक्षा नभएको अवस्थामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा प्रभावकारी हुन गाह्रो नै छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि कर्जा पाउने आशामा व्यवसायिक ज्ञानबिना नै कर्जा लिनु उचित पनि हुँदैन । कर्जा लिएर के काम गर्ने हो रु कति कर्जा लिँदा कस्तो व्यवसाय गर्न मिल्छ रु कुन व्यवसाय गर्दा राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने विषयमा लगानीकर्ता आफैं जानकार भएमा राम्रो हुन्छ । त्यसरी गरिएको लगानीले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिनुका साथै लगानीकर्ताको क्षमता पनि विकास हुने छ । (बैंकर्स ढकालसँग गरिएको लामो कुराकानीको सम्पादित अंश, उनी मुक्तिनाथ विकास बैंकका पूर्व सिईओ एवं डेभलपमेन्ट बैङकर्स एसोशिएसन नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन ।)
२०७५, २6 आश्विन, 06:07:04 PM
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण, सहकारीले छुट्यायो ५० लाख
‘लभ स्टेसन’ अर्को गीत मेरो आगनीमा रिलिज